Bakyaw.com - မြန်မာအောကားများ
ကိုယ်တိုင်ရိုက် မြန်မာ အတွဲ
တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သက်သေဟိုတယ်
အကိတ်မရဲ့Facebook Vdo
All videos of Bakyaw.com
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ တွေးပြီး Messager Group လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ ၀င်ကြေးအနေနဲ့ တော့ ၃၀၀၀ကျပ် Ooredoo ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်သာပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာတော့ တစ်နေ့၅ကားနှုန်းနဲ့ တင်ပါတယ်။ messager group မှာတော့ တစ်နေ့ ကား ၅၀ နှုန်းနဲ့ တင်ပါတယ်။ ၀င်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Viber Number : 09796778054 ကို ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လင်းချင်လင်းမချင်နေ သင့်တာဝန် အခကြေးငွေယူထားပြီး ကား၃၀ပြည့်အောင်တင်ရမှာ ကျွန်တော့် တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၃၀၀၀ ကျပ် ကောက်ခံရခြင်းမှာ ကျွန်တော်သည် တစ်ခါတစ်ရံ အပြင်ရောက်နေချိန်မျိုးတွင် ဖုန်း အင်တာနက်ဖြင့် တင်မိချိန်များတွင် ဖုန်းဘီလ် လွန်စွာထိသောကြောင့် ခုလို ကောက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သတိပေးချက် ။ ။ အက်မင် မထည့်ဘဲ မိမိ ဘာသာ သူတွေ ဂရု့ တည်းထည့်မယ်ဆိုရင် ဘမ်းပါတယ်။ ပြန်ဝင်ချင် ၃၀၀၀…
ဒေါင်းလော့ရယူရန် နိုပ်ပါ (Download) =========================== =========================== ** Step-1.မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Download Link တစ်ခု ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ** Step-2. “5sec”. လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. ” << SKIP AD >> “.ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ** အဆင်ပြေပါစေ